အကြိုက် ဆုံးပုံ ကို ရွေးလိုက်ပါ …သင့် ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ် ကို ပြောပြပေးလိ မ့်မယ်… – သတင်းစုံ
အကြိုက် ဆုံးပုံ ကို ရွေးလိုက်ပါ …သင့် ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ် ကို ပြောပြပေးလိ မ့်မယ်…
လူ အမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။
ဒါ ပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာ များနိုင်ပါတယ်။ ကဲ အကြိုက်ဆုံး ပုံ ရွေးပြီးပြီလား?
သင်က နံပါတ် ၁ ပုံကို ရွေးခဲ့တယ် ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ရော သင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပါ တန်ဖိုးထားတတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ အကူအညီတောင်းရင် ပေးဖို့ ဝန်မလေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့က သင်က အားနာလွယ်တယ်။ ကူညီပေးလွယ်လိုက်တာ၊ စိတ်ပျော့လိုက်တာလို့ ထင်နေပေမဲ့ သူတို့အထင်က မှားယွင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ ကူညီဖေးမမှုတွေကြောင့် သင့်ကိုလည်း တကယ်တန်ဖိုးထား ချစ်ခင်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း အစစ်အမှန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပါပဲ။
တစ်ခြားသူတွေက သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းကို တန်ဖိုးထားတာကြောင့် သင်ဟာ လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ရဲ့လား ?
နံပါတ် ၂ ပုံကို အကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ သင်က မှန်လိုကျင့်ကြံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပေးလိုက်သလို၊ သင်တန်ဖိုးထားသလို တစ်ခြားသူတွေကလည်း သင့်ကိုပြန်ပေးစေချင်တယ်။ ပြန်တန်ဖိုးထား စေချင်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ မပြည့်စုံမှုတွေကို မြင်နေတွေ့နေရတာက သင့်စိတ်ကို အဆင်မပြေဖြစ်စေတယ်။
ဒါကြောင့် သင်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်မနေပဲ အချိန်တော်တော်များများမှာ အထီးကျန်ဆန်နေရသလို ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်က မြန်မြန်ဆန်ဆန် သင်ယူလေ့လာနိုင်ပြီး တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုတော်နေတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ်။
နံပါတ်သုံးကို ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး အမှီအခိုကင်းကင်းနေတတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားသူတွေ ဘာပြောပြော သင့်အိပ်မက်နောက်ကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ် လိုက်နေတတ်သူပါ။
ကျရှုံးမှုဆိုတာကို မလိုချင်ပဲ ကျရှုံးခဲ့ရင်တောင် ခပ်မြန်မြန်ပဲ ပြီးပြည့်စုံအောင် ပြန်ဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်။
တစ်ခြားသူတွေက သင့်ကိုသွေးအေးပြီး တစ်ယောက်တည်းနေတတ်သူလို့ ထင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်း ရင်းနှီးသွားတဲ့အခါမှသာ သင်က ပွင့်လင်းဖော်ရွေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်လေးကို သင်ကအကြိုက်ဆုံး ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အာရုံစုးစိုက်မှုကောင်းတယ်။ ဉာဏ်ရွှင်တယ်။ အလွယ်တကူ အလိမ်ခံရမယ့်လူစားမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြနေပါတယ်။
သင့်မှာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ကြံ့ခိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေပြီး ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်း ပြည့်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ အမြဲ မှတ်ထားသင့်တာက လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါက သင့်ဘဝကိုပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိ ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး နံပါတ် ၅ ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းပြီး အနုပညာဘက်ကို အားသန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး အထိခိုက်မခံတဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေကို ချပြဖို့တွန့်နေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်က အောင်မြင်ပါ့မလား၊ အသိအမှတ်ပြုခံရပါ့မလား ဆိုတဲ့သံသယစိတ်၊ တွေဝေစိတ်တွေဖြစ်နေလို့ပါ။ သင်လုပ်ရမှာက ကျရှုံးမှာကိုကြောကတဲ့စိတ်ဖယ်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့အနုပညာအရည်အချင်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေမြင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါ။
တကယ်ပဲ တူညီရဲ့လား ဖြေပေးခဲ့ဦးနော
မိမိ ကံဇာတာမှာ ထီပေါက် က်ိန်း(ငွေဝင်ကိန်း)ရှိ မရှိ တွက်ကြည့်ရ ​အောင်
မိုးကြိုး ဘယ်လိုလွှဲတာလဲ..(မိုးကြိုးလွှဲ အကြောင်း သိကောင်းစရာ)